အစ်ကိုအရင်း ဖြစ်သူက ညီမဖြစ်သူကို မူးလာတိုင်း ဓါးထောက်မုဒိန်းကျင့် - MM Live News
November 14, 2018 MM Live
အစ်ကိုအရင်း ဖြစ်သူက ညီမဖြစ်သူကို မူးလာတိုင်း ဓါးထောက်မုဒိန်းကျင့် (5)လ ဗိုက်ထွက်လာမှသိရမှု
မအူပင်မြို့မှာနေတဲ့ အဖေ ဦးမောင်ကျော် အသက် (44)နှစ် နှင့် မိထွေးဖြစ်သူ ဒေါ်မိုးမိုး အသက် (40)နှစ် တို့ရဲ့ သမီးငယ်လေး မစမ်းစမ်းမော် အသက် (19)နှစ် အား သူမရဲ့ အကိုအရင်းဖြစ်သူ တရားခံ ရဲဝင်းနိုင် အသက် (21)နှစ် မှ အရက်မူးလာလျှင် ဓားထောက် ပါးစပ်ပိတ်ပြီး မုဒိန်း (4) ကြိမ်တိုင် ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
နုံအပြီး ရိုးသားလွန်းတဲ့ မစမ်းစမ်းမော်က အကိုအရင်းဖြစ်သူ ရဲ့လုပ်ရပ်ကို မိဘများကိုမပြောပြခဲ့တော့(5)လ ဗိုက်လေးထွက်လာမှ သိရပြီး တရားခံ ရဲဝင်းနိုင်မှ မိထွေးဖြစ်သူကို ငွေ70000 ပေးပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခိုင်းလို့ မနေ့ကအပါအဝင်3ရက်လုံး လက်သည်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသော်လည်း ကလေးက မပျက်ကြပဲ မစမ်းစမ်းမော် အရမ်းဖျာနာလာ၍ ဖခင်ဖြစ်သူမှ မအူပင်ရဲစခန်းမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်ပြီး မစမ်းစမ်းမော်အား အခုလက်ရှိ မအူပင် ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူလျှက်ရှိပါတယ်။
ဆရာဝန်ကြီးတွေဆေးစစ်ချက်အရ ကိုယ်အရမ်းပူနေ၍ ဂျိုတု ထည့်ပေးထားပြီး သွေး ဆီး နှင့် လိုအပ်တာများ စစ်ဆေးပေးပြီး ဒီနော အပ်ထရာဆောင်း ရိုက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
3ရက်တိုင် ဖျက်ချ ခံထားရတဲ့ 5လအရွယ်ကလေးလေးကတော့ အသက်ရှင်ဖို့ အခွင့်အရေးအရမ်းနည်းပါးနေတယ်လို့လည်း ခိုင်းနှင်းဝေပရဟိတအသင်း သွားရောက် ကြည့်ရှု စုံစမ်းချက်များမှသိရှိခဲ့ရပါတယ် 😟😟😟
ပုံမှန်ဆို သက်ငယ်မုဒိန်းကျင့်ခံရသူ ကလေးများကိုပဲ ကျွန်မတို့ အသင်းက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိ သော်လည်း ယခုတကြိမ်တော့ မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တခုထဲနဲ့ ကျွန်မတို့အသင်းမှ အစစ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လိုလည်း ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းမှ ဆိုပါတယ်။
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီး ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲအထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာပေါ့ … ??? အဖေအရင်းက သမီးကို ….အကိုအရင်းက ညီမကို …..ဦးလေးအရင်းက တူမကို ……
ဟာ …..ဘာမှဆက်မတွေးရဲလောက်အောင်တဏှာလောဘသမားတွေကိုကြောက်ရွံ့ ရွံရှာနေပါပြီ….
အဈကိုအရငျး ဖွဈသူက ညီမဖွဈသူကို မူးလာတိုငျး ဓါးထောကျမုဒိနျးကငျြ့ (5)လ ဗိုကျထှကျလာမှသိရမှု
မအူပငျမွို့မှာနတေဲ့ အဖေ ဦးမောငျကြျော အသကျ (44)နှဈ နှငျ့ မိထှေးဖွဈသူ ဒျေါမိုးမိုး အသကျ (40)နှဈ တို့ရဲ့ သမီးငယျလေး မစမျးစမျးမျော အသကျ (19)နှဈ အား သူမရဲ့ အကိုအရငျးဖွဈသူ တရားခံ ရဲဝငျးနိုငျ အသကျ (21)နှဈ မှ အရကျမူးလာလြှငျ ဓားထောကျ ပါးစပျပိတျပွီး မုဒိနျး (4) ကွိမျတိုငျ ကငျြ့ခဲ့တယျလို့ သိခဲ့ရပါတယျ။
နုံအပွီး ရိုးသားလှနျးတဲ့ မစမျးစမျးမျောက အကိုအရငျးဖွဈသူ ရဲ့လုပျရပျကို မိဘမြားကိုမပွောပွခဲ့တော့(5)လ ဗိုကျလေးထှကျလာမှ သိရပွီး တရားခံ ရဲဝငျးနိုငျမှ မိထှေးဖွဈသူကို ငှေ70000 ပေးပွီး ကိုယျဝနျဖကျြခခြိုငျးလို့ မနကေ့အပါအဝငျ3ရကျလုံး လကျသညျနှငျ့ ကိုယျဝနျဖကျြခသြျောလညျး ကလေးက မပကျြကွပဲ မစမျးစမျးမျော အရမျးဖြာနာလာ၍ ဖခငျဖွဈသူမှ မအူပငျရဲစခနျးမှာ တိုငျခကျြဖှငျ့ပွီး မစမျးစမျးမျောအား အခုလကျရှိ မအူပငျ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူလြှကျရှိပါတယျ။
ဆရာဝနျကွီးတှဆေေးစဈခကျြအရ ကိုယျအရမျးပူနေ၍ ဂြိုတု ထညျ့ပေးထားပွီး သှေး ဆီး နှငျ့ လိုအပျတာမြား စဈဆေးပေးပွီး ဒီနော အပျထရာဆောငျး ရိုကျပွီး လိုအပျတဲ့ ကုသမှုမြား ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
3ရကျတိုငျ ဖကျြခြ ခံထားရတဲ့ 5လအရှယျကလေးလေးကတော့ အသကျရှငျဖို့ အခှငျ့အရေးအရမျးနညျးပါးနတေယျလို့လညျး ခိုငျးနှငျးဝပေရဟိတအသငျး သှားရောကျ ကွညျ့ရှု စုံစမျးခကျြမြားမှသိရှိခဲ့ရပါတယျ 😟😟😟
ပုံမှနျဆို သကျငယျမုဒိနျးကငျြ့ခံရသူ ကလေးမြားကိုပဲ ကြှနျမတို့ အသငျးက တာဝနျယူဆောငျရှကျပေးလရှေိ့ သျောလညျး ယခုတကွိမျတော့ မိနျးမသားခငျြး ကိုယျခငျြးစာစိတျတခုထဲနဲ့ ကြှနျမတို့အသငျးမှ အစစ ကူညီဆောငျရှကျပေးမှာဖွဈပါတယျလိုလညျး ခိုငျနှငျးဝပေရဟိတအသငျးမှ ဆိုပါတယျ။
ယနေ့ ကမ္ဘာကွီး ဘာတှဖွေဈနကွေတာလဲအထူးသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံကွီးမှာပေါ့ … ??? အဖအေရငျးက သမီးကို ….အကိုအရငျးက ညီမကို …..ဦးလေးအရငျးက တူမကို ……
ဟာ …..ဘာမှဆကျမတှေးရဲလောကျအောငျတဏှာလောဘသမားတှကေိုကွောကျရှံ့ ရှံရှာနပေါပွီ….
သူများလင်ကို ရေလာမြောင်းပေးလုပ်နေတာ မမောသေးဘူးလား ပြောတဲ့ ပန်းဖြူ
မကြာခင်မှာ ရုံတင်ပြသထားတဲ့ မေမြတ်နိုးပါဝင်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားအက်ရှင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီ
ရုပ်ရှင်ရုံအတွင်း နိုင်ငံတော်အလံ အလေးပြုနေချိန် လူငယ် ၁၄ ဦး မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်မှု….
မြန်မာ ပြည်သူတဦးလျှင် ငွေကျပ် ၂၃၀၀၀ နီးပါး ထည့်ဝင်ပါက မြစ်ဆုံကို ပြန်ရမည်ဟုဆို
April 20, 2019 MM Live News